ကျွန်မ နှင့် Hamster ပေါက်ကလေးများ ~ စန္ဒကူး
သေချာစောင့်ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်သွားတယ်...
နေမကောင်းဖြစ်တတ်တာသိထားရက်နဲ့ နေမကောင်းဖြစ်နေမယ်လို့ မတွေးမိဘူး။ အလုပ်သိပ်များနေတယ်ဘဲထင်နေတာ။
ဏီလင်းညိုရေ ..ကူးက အဲလောက်ဇွဲမကောင်းဘူးရယ်... သူတို့တွေက အဲလို ပိုးလိုးပက်လက်လေးတွေအမြဲနေတော့ ကူးက ရိုက်ချင်တဲ့အချိန် ထရိုက်လိုက်တာဘဲ..... နေပြန်ကောင်းလာပါပြီ...
Iora..ရေ.. ကျေးဇူးဘဲနော်.. ကူးအခုသက်သာလာပါပြီ... အလုပ်ပိုပေမယ့်လည်းသူတို့တွေနဲ့ဘဲအဖော်လုပ်နေရတော့ ပျော်တယ်....
တူနေတယ်။ ဒီမှာလဲ ဆေးရုံတက်ရတယ်။ ကွန်ပြူတာမကြည့်နိုင်ဘူး.။
မမ အမြန်ဆုံး သက်သာ ပျောက်ကင်းပါစေလို့...
မမ တော်တော်စိတ်ရှည်တာပဲ... သူများတွေ ရိုးရိုး Hamster မွေးရင်တောင် သေသွားတတ်တာ.. ကလေးတွေတောင် မသေအောင် မွေးတတ်တယ်ဆိုတော့ မမတော်တော်စိတ်ရှည်တာပဲ :D
မမကူး ပြောပြလို့ ဟန်းစားမွေးထားတဲ့ ပူးပူးလဲ သေချာသိရတော့တယ်.
ပူးပူးမွေးထားတဲ့ကောင်လေးတွေက ၁ကောင်ခြင်းစီဖြစ်နေလို့.. အစက
သူတို့ကလေးမွေးရင် သွားမကြည့်ရဘူးဆိုတာ ကိုက်စားပစ်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ခုမှပဲ သေချာသိရတော့တယ်... ကျေးဇူးပါ မမကူးရေ။ နောက်လဲ ကလေးတွေကြီးလာတဲ့ပုံလေးတွေတင်ပါအုံးနော်... :)
အသည်းယားစရာလေးတွေ...ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါနော် မကူး..နောက်ထပ် အကောင်လေတွေပုံ တင်ပါအုံး
လရိပ်အိမ်... ဘာဖြစ်တာတုန်း..နေမကောင်းဝူးလား....း((
ပူးပူး ရေ... အခုတော့ နှစ်စုံထပ်မွေးထားတယ်.. အထီးထီးချင်း..အမအမ ခြင်းဆိုလဲ တစ်ခါတစ်လေ ကိုက်ပြန်ရော... ပူးအကောင်လေးတွေလဲချစ်စရာလေးတွေ အမလာကြည့်သေးတယ် လေ. ဘလော့မှာ...
ဆန်းထွန်း.. ရေ.. ကျေးဇူးပါ... နောက်ထပ်တင်စရာတော့ ကြက်တူရွေးဘဲကျန်တော့တယ်..း))
Look at my web blog - http://socialenginezzz.com/
I am not certain whether this publish is written through him as nobody else recognise such